Nkwekorita McCain nke Nri Ga - enyere Aka Warmebi Okpomoku Uwa Na 1.5 ° C - Potatoes News
Nkwekorita nke McCain ga-enyere aka belata Limwa Okpomoku di na 1.5 Celsius
Ekwenyela nkwa McCain Foods tinyere iji belata ikuku anwuru gas gafee oru ya niile site na njedebe nke afo iri iji kwado igbali okpomoku zuru uwa rue 1.5 Celsius.
N'ikwekọ na atụmatụ ya nke Global Sustainability na nkwa iji mepụta nri enyi na mbara ụwa, McCain Foods gbasiri ike ịtọhapụ akụkọ mbụ nkwado ya n'afọ gara aga.
Site na mwepụta nke Mkpokọta Nkwado Global Sustainability maka Mkpokọta nke 2020 n'izu a, ọ kwuputara na atụmatụ Mbelata mbupata ya na ebumnuche ya bụ atụmatụ Science Science Targets, na-akwado ha na sayensị ihu igwe dị ugbu a na ebumnuche ebumnuche nke nkwekọrịta Paris mee ka okpomoku zuru ụwa ọnụ ruo 1.5 Celsius.
McCain bụ naanị ụlọ ọrụ na ihe ọ beụ beụ na ihe ọ beụ beụ na Canada - yana otu n'ime naanị 33 n'ụwa - ka ebumnuche Science based Targets nwere nkwa iji belata nsị ya.
Max Koeune, onye isi na onye isi ọrụ nke McCain na-ekwu, sị: "Site n'inwe ebumnuche anyị dị ka nke sayensị, McCain na-ahụ na omume anyị ga-enye ezigbo onyinye na mbọ niile ụwa na-agba iji gboo mgbanwe ihu igwe."
“Mgbe anyị kwuru na anyị na-ebelata ikuku anwuru anyị site na 50%, nke ahụ bụ mbibipụta gafee arụmọrụ anyị. Enweghi ike iji ihe eji eme ihe na carbon mee ihe na ebumnuche sayensi. Nke a bụ mkpebi siri ike siri ike ịkwaga na nnọpụiche carbon. ”
Mkpokọta Nkwupụta Global Sustainability nke McCain nke 2020, Tinye aka, nri nri enyi na enyi, gosiputara usoro nke nkwa na atumatu ga enyere ụlọ ọrụ aka iru ebumnuche ya. Ntinye aka nke ulo oru iji mejuputa oru ugbo ndi ozo na 100% nke acreage ya ga enyere aka belata 25% umu anwuru.
Uzo ozo di iche iche bu ugbo ala nke igwe na ihe omimi biocain McCain na-ewu ulo oru ya na Ballarat, Australia. Nịm iji rụọ ọrụ zuru oke na-esote afọ, ọ ga-eweta nbelata 39% na ume site na ntanetị, ma belata ikuku carbon site na tọn 27,000 kwa afọ.
Ebumnuche ndị ọzọ na-eme ka carbon belata ma ọ bụ na-aga n'ihu gụnyere:
100ga na 2030% ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe site na XNUMX.
Iwulite ikike mmeghari ohuru na nhazi ya.
Kwụsị iji coal rụọ ọrụ niile, gụnyere China ebe ọhụụ na-adịbeghị anya na-ebelata nsị carbon kwa afọ nke McCain site na tọn 21,000 kwa afọ.
Ọzọkwa ibelata ịdabere na mmanụ ọkụ site na ọkụ eletrik na mmanụ ndị ọzọ.
Na-aga n'ihu na-eme ka nrụpụta arụmọrụ ike gafee ụlọ ọrụ ya zuru ụwa ọnụ
Gbaa mbọ hụ na 100% nke nkwakọ ngwaahịa ga-emegharị, nweghachi, ma ọ bụ compostable site na 2025.
Tags: McCain nri
Iji agwa sitere na nduku bekee emere nduku bu uzo kachasi nma iji mee ya obere
Obere anwuru ma belata oriri mmanụ: echiche injinị ọhụrụ maka ngwa-ụzọ awara awara jikọtara arụmọrụ yana nchebe ihu igwe
Onye na - ahụ maka ududo na ihe nduku (bio alternatives)
Kedu ihe biostimulant na-eme na osisi?
Oti mkpu edemede nke ndi na eto ihe na biostimulants & biofertilizer
"Nduku na magnesium, anyị ibu nri"
UK: 'Mgbu njikwa maka taa na echi'
Mexico na-etinye ụtụ isi na Ngwaahịa Nduku US Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ nke nzaghachi maka toda Trumpgwè na Aluminom